I-TRF kwiRadiyo - Isiseko soMvuzo - Uthando, isini kunye ne-Intanethi
Ikhaya TRF kwiRadio
UMary Sharpe wamenywa ukuba ajoyine USara Brett kwiRadiyo 5 phila ukuxoxa ngokunyuka okumangalisayo kwamanani abantu abancinci abafuna unyango lwezesondo kwi-NHS. Kule ngxoxo nge-7 ka-Okthobha i-2019 sifunda ukuba imfuno engaphantsi kweminyaka ye-19 yonyango lwezesondo inyuke amatyeli amathathu kwiminyaka nje embalwa. Ngexesha le-2015 ukuya kwi-2017 bekukho ukuhanjiswa kwe-1,400 ye-NHS kubantu abancinci kunyango lwezesondo. Kwithuba elilandelayo ukusuka kwi-2017 ukuya kwi-2019 oku kukhule kwaba malunga ne-4,600. Yiva iingcinga zikaMariya ngendima yokusebenzisa iphonografi ekuqhubeni olu tshintsho.
I-PM yiendaba eziphathekayo kunye nemicimbi yenkqubo yangoku kwi-Radio 4, ukusasazwa e-UK, kwaye ngokwenene ijikeleze ihlabathi lonke. NgoMvulo 1st Aprili 2019 Evan Davis wazisa iqela le-6-minute ngomgcini-ntatheli Chris Vallance kwinkqubo yokuqinisekisa yobudala yase-UK ukunciphisa ukufikelela ngokulula kwabantwana kwi-hardcore ekwi-intanethi. UMary Sharpe, u-CEO we-TRF, uthi kutheni lo mthetho usabalulekile, nokuba awufezekanga.
I-BBC Radio Scotland yintanethi yethu yangaphakathi. I-TRF ibonakale kwimiboniso emininzi kwaye unako ukusikhangela BBC Izandi.
Umthengisi wefashoni kwiBohoohoo.com wayenayo enye yeentengiso zayo eziye zavalwa nguGunyaziwe weMigangatho yeNtengiso ngokusebenzisa isiqubulo "Thumela ubunqunu" ukukhuthaza iimpahla ezinombala wolusu. UMary Sharpe wajoyina uJess McBeath kunye nabanye abagqabazi kwiKaye Adams show kwi-17 ka-Okthobha 2019 bajonga ubulumko bokugweba ukusuka kwindawo yokukhusela umntwana.
Zithini iimpembelelo zokuthumelelana imiyalezo nemiyalezo elumkisayo? UMary Sharpe wabonakala kwi-Good Morning Scotland kwi-3 kaSeptemba 2019 kunye neRape Callen Scotland. Funda ngakumbi malunga nokuthumelelana imiyalezo nemiyalezo ethunyelwa nge-intanethi kunye nomthetho eScotland Apha.
Ngomkhankaso wokuqalisa ukuQinisekiswa kweMinyaka e-UK, uMary Sharpe wajoyina i-fowuni-fowuni kunye noLaura Maxwell ngo-18 April 2019. Ukutshintshwa kweminye yemizuzu eyi-6 kufaka iinkcazo zakhe kwingxenye yokugqibela yale program.
Ukuthetha nabantu abancinci malunga neefostile kwakuyintloko yempikiswano ebanjwe Kaye Adams Nge-20 ka-Matshi 2019. UMary Sharpe waboniswa kunye noSarah, omnye wabomama abavela kwiChannel 4 ye-docu-uthotho "Mums Make Porn", uAndrea Chapman ongumcebisi kunye nomlweli we-porn uJerry Barnett.
Yivumelani uMary Sharpe ethetha ngemvume kunye noonografi kwisigaba esifutshane UStephen Jardine bonisa kwi-15 Februwari 2019.
John Beattie lugxininise ngokuxutyushwa kwimibala engamanyala e-20 Novemba 2018. Iindwendwe zazinguMary Sharpe, u-Anne Chilton kwi-Relationships Scotland kunye no-Emma Kenny.
UStephen Jardine Udliwano-ndlebe noMary Sharpe, kunye nomfundisi kunye nomama ochaphazelekayo kwinkqubo ye-Radio Scotland phakathi kwentsasa ye-17 Julayi 2018.
U-Mary Sharpe wadliwano-ndlebe ngu-Ian McNally kwiRadiyo yeNafier kwi-10-minute yemizuzu eyi-Digital Drugs. Ishicilelwe kwi-intanethi ngomhla we-27 Oktobha 2017.
Radio ngaphandle kweScotland
Inkonzo yehlabathi ye-Radio Sputnik eMoscow yabuza uMary Sharpe ngemizuzu ye-11. Ngethuba ludliwano-ndlebe abaxoxwa ngalo ngokunyuka kokuphazamiseka kokuxhaphazwa ngokwesondo ngo-on-child kubikwa eNgilani naseWales. Kwasasazwa kubaphulaphuli behlabathi lonke kwi-9 Oktobha 2017.
UMary Sharpe udliwano-ndlebe no-Stig Abell kule ndawo ye-3 ngomzuzu kwiLBC Radio eLondon, 21 Agasti 2016. Yaya kwi-UK ngokubanzi.
UMary Sharpe uxoxisana nokuqeqeshwa kobungqina bezocwangco kwintetho ye-18 ngomzuzu kaStephen Nolan kwiRadio Ulster eNyakatho ye-Ireland.
nqakraza Apha ukuba ufuna ukuva ezinye zeencoko ezinxulumene noko kwiinkqubo zikamabonwakude zikaStephen Nolan.